Baarlamanka Somalia oo la horgeeyay sharci “ogolaanaya in dalka laga furi karo Kaniisado” - Jigjiga Online
HomeSomalidaBaarlamanka Somalia oo la horgeeyay sharci “ogolaanaya in dalka laga furi karo Kaniisado”
Muqdisho (JigjigaOnline) – Axdiga Ilaalinta Hiddo Dhaqameedka Xiliyada Colaadaha ayay shalay Xildhibaanada Golaha Shacabka dood geliyeen markii ay horgeysay Wasaaradda Waxbarashadda ee xumuumadda ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Fadhiga oo ahaa kulankii saddexaad ee Kalfadhiga 6aad ayaa waxaa kasoo qeybgalay inta badan mudaneyaasha Aqalka Hoose.
Xildhibaano fadhiga ka hadlay ayaa qeexay in Axdigan “uusan muhiim ahayn” maadaama “uu ka hor-imaanayo Diinta suuban ee Islaamka”.
Sharcidejiyeyaal kale oo sheegay in tallooyinkii laga taagay Muqdisho aanan loo eegin waxay Diinta Islaamka ka qabto ayaa xusay in Axdiga uu u ogolaanayo dowladaha Masiixiga in ay Kaniisado ka furtaan dalka.
Khal-khal amni ayay cod dheer ku xuseen in uu abuurayo “maadaama ay joogaan kooxaha argagixisadda ah ee Al-Shabaab iyo Daacish [ISIL]”.
Mid kamid ah Xildhibaanadda kulanka ka hadlay ayaa daboolka ka qaadey mid kamid ah tafaasiisha halista ah ee Axdiga ku jira.
“Axdiga wuxuu dhigayaa in Kaniisadaha dalka ku yaala in loo ilaaliyo sida Masaajida, marka sidee laysku waafujinayaa Diinta Islaamka oo Dastuurkeena uu sheegayo in ay tahay mida kale ee la ogol yahay”.
Dastuurka qabyadda ah ee federaalka qodobadkiisa labaad farqadihiisa koowaad, labaad iyo saddexaad ayaa xeerinaya arrimahan.
– Diinta Islaamka waa Diinta Dalka
– Diin aan ahayn Diinta Islaamka laguma faafin karo dalka